ओलीलाई दिल्लीको धक्का
10 May 2016 मङ्गलबार २८ बैशाख, २०७३
दीपेश केसी दीपेश केसी दिल्लीमा वैशाखको उखरमाउलो गर्मीले पारो चढिरहँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवादेखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसम्मले स्वास्थ्योपचार यहीँका नाम चलेका निजी अस्पतालमा गराए। चर्को गर्मी र रेगिस्तानबाट तातो हावासहितको आँधीबेहरीको दिल्लीको मौसममा नेपाली राजनीतिका खेलाडीहरूले नितान्त स्वास्थ्योपचारको कारण देखाएर राजनीतिक भेटघाटसमेत गरे। विस्तृतमा पढ्नुस्
गोविन्द पौडेल गोविन्द पौडेल लोकतन्त्र अवलम्बन गरेको ठूलो देश भारतमा गरिबीका कारण प्रत्येक वर्ष ५ हजारदेखि १० हजार किसानले आत्महत्यागर्छन्। भारतीय राष्ट्रिय अपराध तथ्यांकविभागका अनुसार त्यहाँ प्रत्येक दिन ९३ वटा बलात्कारका घटना सार्वजनिक हुन्छन्। भोकमरीका कारण मान्छे मरिरहेका छन्। आर्थिक असमानताको खाडल फराकिलो हुँदैछ। विस्तृतमा पढ्नुस्
पुजारी र पुनर्निर्माण
डा. नम्रता पाण्डे डा. नम्रता पाण्डे एक भिखारी जीवनभर मन्दिरको ढोकामा बसेर भिख मागिरहन्छ र अर्को पुजारी जीवनभर मन्दिरभित्र बसेर पूजा गरिरहन्छ र पनि दुवैमा तात्विक भिन्नता केही आएको पाइँदैन। सरसर्ती हेर्दा नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य र अस्थिरतालाई भिखारी र पुजारीसँग तुलना गर्दा कुनै फरक पर्दैन। विस्तृतमा पढ्नुस्
जेठ १५ मै बजेट ल्याऊ
09 May 2016 सोमबार २७ बैशाख, २०७३
सम्पादकीय सम्पादकीय सत्ता परिवर्तनको चलखेल केही समयका निम्ति पटाक्षेप भएको छ। यो पटाक्षेपले यस वर्षको बजेट समयमा ल्याउन केही सहज भएको देखिएको छ। झण्डै एक दशकदेखि बजेट समयमा आएको छैन। यसले चौतर्फी असर पार्दै आएको छ। विस्तृतमा पढ्नुस्
केशव शर्मा (पौडेल)\_ ऋषिराम पराजुली केशव शर्मा (पौडेल)\_ ऋषिराम पराजुली गोरखा केन्›विन्दु भएको ७.८ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको वर्ष दिन बितिसकेको छ। त्यसपछिका एक वर्षमा मात्र ४ म्याग्निच्युडभन्दा ठूला ४०० भन्दा बढी पराकम्पन गइसकेका छन्। ती भूकम्प र पराकम्पनका कारण करिब ९,००० को मृत्यु, करिब २२,३०० घाइते भएका छन् साथै करिब… विस्तृतमा पढ्नुस्
रघुनाथ लामिछाने रघुनाथ लामिछाने संविधान सभाबाट तयार भइवरी ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिको सहमतिमा जारी हुन लागेको संविधान घोषणा हुनबाट रोक्न हतारहतार पठाइएका भारतीय विदेश सचिवको असफलतासँगै भारत नेपालबाट इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो झट्का महसुस गर्न बाध्य भयो। यसबाट ऊ कतिसम्म आक्रोशित हुन पुग्यो भन्ने उसले बिनाकारण… विस्तृतमा पढ्नुस्
राजु नेपाल राजु नेपाल हालसालै एउटा सरकारी आँकडा आएको छ, चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशतको हुने। यो सूचना आएको भोलिपल्टै झण्डै सरकार ढलेको थियो। सरकार ढलेको भए यो अंकको कुरा त्यत्तिकै सेलाउँथ्यो। सरकार त ढल्नबाट बच्यो। तर, यो अंक बुझ्ने–नबुझ्ने सबै नेपालीका… विस्तृतमा पढ्नुस्
प्रेमराज जोशी प्रेमराज जोशी चीनमा अहिले सबैमा 'वान वेल्ट वान रोड (ओबिओआर) को भूत सवार छ। चिनियाँ राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र वा प्राज्ञिक जगत आफ्नो देशको भविष्य, सपना, मिसन जस्ता जेसुकै सन्दर्भ उठून्, ओबिओआर जोड्न छाड्दैनन्। लाग्छ, चिनियाँ भविष्यको निर्धारण अब कुनै कुराले गर्दैछ भने त्यो… विस्तृतमा पढ्नुस्
भ्रमण स्थगनको निहितार्थ
08 May 2016 आइतबार २६ बैशाख, २०७३
सम्पादकीय सम्पादकीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बहुप्रचारित भारत भ्रमण अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको छ। आफ्नो भारत भ्रमणबारे सरकारले औपचारिक निर्णय गर्नुअघि नै हतारमा राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार केही सञ्चारकर्मीलाई शीतलनिवासमा बोलाएर जानकारी दिएकी थिइन्। विस्तृतमा पढ्नुस्
चरण प्रसाईं चरण प्रसाईं अन्ततः वैशाख २० गते पत्रकार एवं अधिकारकर्मी कनकमणि दीक्षित रिहा भए। सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले उनलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दियो। विस्तृतमा पढ्नुस्
StartPrev…NextEndPage9of 507	भर्खरै...